10 kun oo Euro ayaa lagu siinayaa haddii aad degayso magaaladan! | Radio Himilo
Home / Deegaan / 10 kun oo Euro ayaa lagu siinayaa haddii aad degayso magaaladan!
10 kun oo Euro ayaa lagu siinayaa haddii aad degayso magaaladan!
Himilo FM –Magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Talyaaniga ayaa wajahaya dad yari, waxayna tani ku qasbeysaa maamulka maxaliga ah inay dadka u sheegaan lacago badan oo loo siinayo abaal marin haddii ay dagayaan magaalada.
Sida warbaahinta CNN-ka soo warisay duqa magaalada Lokana ee dhacda xuduuda Faransiiska iyo Swizarland ayaa ballan qaaday lacag u dhaxaysa 200 illaa iyo 10,000 Euro oo la siinayo qoys kasta oo deegaan ka dhiganaya magaalada muddo seddex sanno oo xiriir ah.
Ballan qaadka duqa magaalada Lokana waxaa laga yaabaa inuu soo jiito durba dadka wahsiga badan hase ahaatee waxaa xusid mudan in heshiiska uu leeyahay shuruudo.
Waxaa kamid ah shuruudaha in qoyska heysto ugu yaraan cunug iyadoo waajib tahay dakhliga sanadlaha ee qoyska inuu ka badan yahay 8650 Doolar.
Magaalooyin badan oo ku yaala Talyaaniga ayaa ka cabanaya dad yari, waxaana la qaaday olole lagu dhiira geliyo nolosha magaalada iyadoo guryaha qaar lagu iibiyay lacag ka yar 1 Doolar.
Magaalada Lokana waxaa ku noolaa 7 kun oo qofood qarnigii 20-aad hase ahaatee waxay tiradaasi hoos u dhacday illaa 1500 qofood. Sannad kasta, waxaa ku dhasha magaalada 10 cunug iyadoo ay dhintaan 40 qofood.
Previous: Real Madrid oo u weecatay bedelka Karim Benzema
Next: Haweenay kelideeda ugu deeqday dhibane aysan aqoon!